पूर्वाधारमा लगानी गर्न १० अर्बको एनआरएन कोष, कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर « Kathmandu Television HD
काठमाडौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी जुटाउनका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) ले एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडको दर्ता प्रकृया थालेकाे छ ।
एनआरएन डेभलपमेन्टमा लगानी जुटाउन प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साढे ८ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन हुनेछ ।
आईपीओ विदेशमा रहेका एनआरएनहरुका लागि मात्र हुनेछ । पहिलो चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी विदेशबाट ल्याउनका लागि फण्ड स्थापना भएको छ । जसमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँको स्वपुँजी र बाँकी आईपीओबाट जुटाइने भएको छ । बिहीबारदेखि विधिवतबाट लगानी प्रतिवद्धता भएको छ । एनआरएनको पहलमा स्थापना हुन लागेको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डको प्रबन्धपत्र नियमावली तथा कम्पनी दर्ता कागजातमा हस्ताक्षर भएको छ ।
काठमाडौँमा उपलब्ध संस्थापकहरूका तर्फबाट आज हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र सोनाम लामा, कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, सल्लाहकार हरिबोल भण्डारी लगायत डा. खगेन्द्र जीसी, चिरञ्जिीवी थापाले प्रबन्ध पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन।
यो कम्पनीमार्फत नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने तयारी छ । १० अर्बको कोषमा सरकारले ५ प्रतिशत अर्थात ५० करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जनाइसकेको पन्तले बताए। यस्तै संस्थापकहरूको तर्फबाट १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने र त्यसमध्येको १ अर्ब ८० करोडको प्रतिबद्धता जुटिसकेको अध्यक्ष पन्तले जानकारी गराए ।